Yiziphi izinsiza zamasu wokwakha i-backlink?
Ake siqale ngencazelo yesu lokuklama isixhumanisi. Uma u-Google kuleli gama, uzothola uhlu lwamaciksi angakusiza ukuba uvikele izixhumanisi, kodwa angakunikeli kuhlelo lokuxhumana lwesixhumanisi jikelele.
Ngokuvamile, lawa macebo achaza umqondo wokwakha okuqukethwe okubalulekile ukwenza ezinye izixhumanisi zewebhu zixhunywe ezakho. Omunye umqondo ongasiza futhi ukuhlanganisa isixhumanisi kufaka phakathi - ukwakha ubuhlobo nokusebenzisana kwe-inthanethi; khuthaza amakhasimende ukuthi axhumane; share umthombo ngaphakathi komphakathi wakho; bahlanganyele emicimbi ye-intanethi kanye nomphakathi.
Yonke le mqondo iyasebenza futhi iyigugu kumasu wokwakha i-backlink. Noma kunjalo, zisitshengisa kuphela izizathu ezenza ezinye imithombo yewebhu ingaxhuma kusizinda sakho. Abanikeli impendulo egcwele embuzweni wakho, ukunikeza nje ingxenye yesiteleka.
Isixhumanisi sokwakha isixhumanisi inqubo yokufinyelela imigomo yebhizinisi ngokusebenzisa imithombo yewebhu etholakalayo. Ukuxhumanisa inqubo yokwakha ibheka njengendlela yamasu ngoba umgomo wakho wokugcina lapha ngokuqondile kuxhomeke ekusebenzeni. Nokho, akunakwenzeka ukufeza umphumela ngaphandle kokusebenza okulungile. Uma kungenjalo, izixhumanisi ozilondekile zingase zingabheki noma zingase zingabheki njengezinhloso zakho zangempela zebhizinisi.
Lesi sihloko sizinikezele ngendlela efanele ekusebenziseni ama-SEO wokuxhumanisa amasu. Ake siqale ngalokho umgomo wakho wokwakha umkhankaso wokwakha wokuqala kufanele ubonakale.
Izizathu zokuthi kungani isayithi lakho lifuna amasu wokwakha i-backlink
Yakha ukuxhumana phakathi kwemithombo yewebhu ye-quality
Iwebhusayithi ngayinye naphezu kokuqondisa kwayo nosayizi idinga emuva kwe-backlinks. Kukhona ingxenye ebalulekile yesakhiwo se-Intanethi. Nokho, kungani sidinga izixhumanisi zangaphandle?
Kunezizathu ezimbili eziyinhloko odinga ama-backlink:
Ukuxhumana nemiphakathi e-intanethi enemvume, amawebhusayithi, kanye namapulatifomu embonini yakho;
Ukulinganisa imigomo yokucinga evumelekile nephezulu.
i-Google ihlola amawebusayithi nge-PageRank algorithm. Le-algorithm ye-Google isebenzisa ama-backlink kusuka kwamanye imithombo ehloniphekile ukuze inqume ukuthandwa kwekhasi lewebhu, igunya, nokubaluleka. Le algorithm ithonya ngokuqondile isikhundla sewebhusayithi ekhasini lemiphumela yokusesha futhi iveza idumela lomthombo wewebhu emehlweni kaGoogle.
Thola umgwaqo ohlosiwe
Isu elicacile luphawuleka kulabo abafuna ukutshala ekuxhumaneni ukwakha. Udinga ukuqondisa umgomo ngaphezu kwe-backlink ngayinye. Uma kungenjalo, yonke le mkhankaso nemizamo oyifaka kuyo ngeke kube usizo. Ngakho-ke, ukubuza umbuzo mayelana nenjongo oyidingayo isixhumanisi? Impendulo ejwayelekile kunazo zonke futhi enengqondo kulo mbuzo ukutholakala kwemigwaqo. I-Traffic kusho ukuthi amakhasimende amaningi angase atholakale kusayithi lakho futhi mhlawumbe aguquke abe amakhasimende akhokhelayo. Ukuchaza umgomo wakho kufanele uqale ngokucwaninga ngethuba. Udinga ukucwaninga ukuthi yiziphi amathuba okukhona ngaphakathi kwe-niche yakho nokuthi ungazuza kanjani kuzo.
Ukuhlaziya ukusebenza kwakho kwamanje, imithombo yewebhu etholakalayo kuwe, futhi udale uhlelo lokulithuthukisa. Ngokwenza lokho uzokwazi ukuthuthukisa isu lakho lokwakha isixhumanisi Source .